Yonke into ofuna ukuyifumana malunga noPhuhliso oluZinzileyo (ukusuka kwi-0 ukuya kwi-100) | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Yonke into ofuna ukuyifumana malunga nophuhliso oluzinzileyo
Uphuhliso oluzinzileyo ngumxholo ngokuqinisekileyo esiye weva ngawo. Njengoko kuchaziwe, kubonakala ngathi luphuhliso lwabemi olujolise kwikamva inokuzixhasa ngexesha. Nangona kunjalo, njengoko kuhlala kusenzeka kwiimeko apho wonke umntu elisebenzisa eli gama, ukusetyenziswa kwalo okugqithisileyo kukhokelela ekuphathweni gadalala ukuya kwinqanaba lokugqwetha intsingiselo yentsusa neyokuqala.
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba yintoni Uphuhliso oluphathekayo nayo yonke into enxulumene nayo?
1 Imvelaphi yophuhliso oluzinzileyo
2 Iimpawu zophuhliso oluzinzileyo
3 Uphuhliso lwezoqoqosho nezentlalo oluhlonipha okusingqongileyo
4 Imiba yokusingqongileyo ijongiwe luphuhliso oluzinzileyo
5 Iindidi zozinzo
5.1 Ukuzinza kwezoqoqosho
5.2 Ukuzinza kwezentlalo
5.3 Ukugcinwa kwendalo
Imvelaphi yophuhliso oluzinzileyo
Ukuqala ngeye-1970s, oosonzululwazi baqala ukuqonda ukuba uninzi lwezenzo zabo luvelise impembelelo encinci kwindaloKe ngoko, ezinye iingcali zalatha ukulahleka okubonakalayo kwendalo eyahlukeneyo zaza zaphuhlisa ithiyori zokuchaza ukuba sesichengeni kweenkqubo zendalo.
Olunye lweempawu ezigqwesileyo zeli xesha lethu kukuma komhlaba njengesakhelo esiqhelekileyo kunye nesiphelo sabo bonke abantu. Oko kukuthi, siphuma kwilizwe elinye okanye kwelinye, sonke singabeplanethi enye, sinemithombo yendalo ephelileyo, sinendawo encinci ekufuneka sabelane ngayo.
Enkosi kumajelo eendaba kunye netekhnoloji, sonke sinokufumana ulwazi malunga nokwenzekayo naphina emhlabeni. Ukongeza, ukuphuhliswa kwemizi-mveliso kunye nokufunyanwa kwamafutha asefosili kusivumele, kwiminyaka nje engama-260, ukuba siphumelele kumanqanaba aphezulu kakhulu.
Ngo-1987 wakhutshwa ingxelo yaseBrundtland (eyayibizwa ngokuba "liXesha lethu eliHlangeneyo") yiKhomishini ye-UN yezeNdalo noPhuhliso, echaza uphuhliso oluzinzileyo njengolo luphuhliso olufuna ukuhlangabezana neemfuno zezizukulwana zangoku ngaphandle kokubeka esichengeni amathuba ezizukulwana ezizayo iimfuno.
Injongo yale ngxelo yayikukufumana iindlela ezizezinye zokubuyisela umva iingxaki zophuhliso kunye nokusingqongileyo, kwaye ukufezekisa oku bachitha iminyaka emithathu kumanyelwa esidlangalaleni kwaye bafumana ngaphezu kwama-500 amagqabantshintshi abhaliweyo, eziye zahlalutywa ngoososayensi kunye nabezopolitiko abavela kumazwe angama-21 kunye neengcamango ezahlukeneyo.
Iimpawu zophuhliso oluzinzileyo
Uphuhliso oluzinzileyo lusebenza lukhangela ukulingana phakathi kweentsika ezintathu ezisisiseko: I-ecology, uqoqosho kunye noluntu. Uphuhliso oluzinzileyo ngokuhamba kwexesha kufuneka lube nokulingana phakathi kokukhuselwa kwendalo kunye nezinto eziphilayo, kufuneka luncede ekuphuculeni uqoqosho lwamazwe kwaye kwangaxeshanye, lube negalelo kuphuhliso loluntu lwale mihla, ngaphandle iingxaki ezinjengokungalingani, ubuhlanga, ubundlobongela obuphathelele kwezesini, njl.
Ukuze ilizwe libe nophuhliso oluzinzileyo kunye noluntu ukuqhubela phambili nokuchuma, kubalulekile ukuba iimfuno ezisisiseko zentlalo ezinje ngokutya, impahla, izindlu kunye nomsebenzi ziyahlangatyezwa, kuba ukuba intlupheko iyasasazeka okanye yinto eqhelekileyo, eminye imimandla emibini isenzo asinakuphuhliswa.
Njengoko uphuhliso nentlalontle zikhawulelwe kwinqanaba lobuchwephesha, izixhobo zendalo esingqongileyo, kunye namandla okusingqongileyo ukufunxa iziphumo zomsebenzi woluntu, kufuneka senze ngokoko sinako kwaye musa ukuphelisa izixhobo. Ukukhula okungenamkhawulo yinto engenakuphepheka, kuba iplanethi yethu iphelile.
Ukujongana nale meko, ukubakho kokuphuculwa kwetekhnoloji kunye nombutho wentlalontle kuyavela, ukuze imeko-bume ibuye kwakhona kwinqanaba elifanayo njengoko kuchatshazelwa yimisebenzi yabantu, ukuthintela ukunqongophala kwezixhobo.
Uphuhliso lwezoqoqosho nezentlalo oluhlonipha okusingqongileyo
Ngenxa yokuba ukukhula kwethu kufuneka kunxulunyaniswe nokuphuculwa kweentsika ezintathu (uqoqosho, indalo kunye noluntu), injongo yophuhliso oluzinzileyo Ukuchaza ezona projekthi zinokwenzeka ezinokuthi zilungelelanise imeko yezoqoqosho, ezentlalo kunye nokusingqongileyo kwimisebenzi yabantu kwaye ziyiphucule ngaphandle kokutshabalalisa iplanethi okanye izixhobo zokuchitha.
Onke amaziko ehlabathini (kokubini abantu kunye neenkampani, imibutho, njl. Njl.) Kufuneka athathele ingqalelo ezi ntsika zintathu xa esenza izicwangciso, iinkqubo kunye neeprojekthi, kuba ukuba sifuna ukuqhubeka nomgangatho wethu wokuphila kwaye siwugcinele izizukulwana ezizayo, thina kufuneka silondoloze izibonelelo zethu.
Uluvo lokuba ilizwe linokukhula kwezoqoqosho ngaphandle kwemida kwaye ngaphandle kokuncama nantoni na yinto elungileyo. Kude kube ngoku, uluntu lwethu lusekela ukuveliswa kwamandla ekutshisweni kwezibaso ezifana neoyile, igesi yendalo okanye amalahle. Le ndlela yokusebenza kunye nokukhula kwezoqoqosho, ingcolisa umoya wethu, amanzi kunye nomhlaba, kwaye, ibangele ukupheliswa kunye nokudodobala kobutyebi bendalo.
Ngophuhliso lwetekhnoloji yamandla ecocekileyo kunye nengahlaziyekiyo, ukuxhomekeka kumafutha epetroli kuye kwancipha. Nangona kunjalo, akwanelanga ukuthoba ngokupheleleyo uqoqosho lwethu kwizibaso. Ke ngoko, indlela eya kuwo onke amazwe yile yotshintsho lwamandla ngokusekwe kuqoqosho lwamandla ombane oluhlaziyiweyo.
Imiba yokusingqongileyo ijongiwe luphuhliso oluzinzileyo
Ukubaluleka kokudala iimeko zexesha elide ezenza ukuba kube nokuphila kakuhle kwizizukulwana zangoku ezingenziwa ngexabiso lesoyikiso okanye ukonakala kweemeko zokuphila ezizayo zobuntu akunakuphikiswa. Ke ngoko, uphuhliso oluzinzileyo luthathela ingqalelo imiba yokusingqongileyo ebaluleke kakhulu kwaye echaphazela iintsika ezintathu ezisisiseko.
Itshata yoMhlaba Yingxelo ebhengeza iindlela zokuziphatha zehlabathi ekufuneka ilizwe elinokuzinza libe nazo kwaye inika intetho ebanzi nebanzi yeenqobo ezisesikweni kunye nemithetho-siseko enxulumene nozinzo. Oku kwakhutshwa kangangesithuba seminyaka eli-10, eyaqala kwiNgqungquthela yaseRio Janeiro ngo-1992.
Ukuba semthethweni koMnqophiso woMhlaba kuza ngqo kwinkqubo yothatho-nxaxheba eyadalwa kuyo, njengoko amawaka abantu kunye nemibutho evela kwihlabathi liphela ithathe inxaxheba ukufumana ezo zinto zixabisekileyo kunye nemithetho-siseko enokunceda uluntu ukuba luzinze. Nanamhlanje, mininzi imibutho nabantu abasebenzisa le leta ukufundisa ngemicimbi yendalo esingqongileyo kunye nefuthe kwezopolitiko zasekuhlaleni.
Ngakolunye uhlangothi, Isibhengezo seHlabathi kuLwahluka kweNkcubeko (Unesco, 2001) singena kwisidingo sokuba sikhuliswe ngokweyantlukwano ngokwenkcubeko kunye nokusingqongileyo kunye nokwahluka ngokwendalo. Ukuze uqonde konke ukusebenza kwezinto eziphilayo, umntu kufuneka ayazi imbali yomntu, kuba nefuthe kuphuhliso lwezinto eziphilayo.
Ke ngoko, kunokuthiwa iyantlukwano yenkcubeko iba yenye yeengcambu zophuhliso eziqondwayo kungekuphela malunga nokukhula koqoqosho, kodwa njengesixhobo sokuphumeza. ulwaneliseko ngakumbi ngokwasemoyeni, ngokweemvakalelo, ngokuziphatha nangokomoya. Ngamanye amagama, iba yintsika yesine yophuhliso oluzinzileyo.
Kuxhomekeke kwindawo apho imisebenzi yelizwe ijolise kuyo, uphuhliso oluzinzileyo luya kukhokelwa ngandlela thile.
Oluzinzo lwenzeka xa imisebenzi yendawo ijolise kuyo uzinzo kwindalo esingqongileyo nakwintlalo. Izama ukulungelelanisa iingxaki zentlalo kunye nokusingqongileyo ngendlela enenzuzo kunye nezezimali.
Xa sithetha ngozinzo kwezentlalo sibhekisa kulondolozo lomanyano lwentlalo kunye nezakhono zabasebenzi ukulandela iinjongo ezifanayo zophuhliso. Ukuze benze oku, kufuneka asuse zonke iimpembelelo ezingalunganga zentlalo ezibangela imisebenzi eyahlukeneyo kwaye zonyusa ezilungileyo. Ikwanxulumene nenyaniso yokuba uluntu lwasekhaya lufumana izibonelelo zophuhliso lomsebenzi owenziweyo ukuphucula iimeko zabo zokuhlala.
Nguye ozama ukudibanisa ukukhula koqoqosho kunye nokulondolozwa kwendalo, indalo kunye nobutyebi bendalo. Imisebenzi yethu ivelisa iimpembelelo ezimbi ezonakalisa indalo kunye nokutshabalalisa amakhaya angamawaka eentlobo, ebangela ubuhlwempu bezinto ezahlukeneyo. Ke ngoko, uzinzo kwindalo esingqongileyo izama ukufumana uzinzo phakathi kophuhliso lwezoqoqosho lwelizwe ngemisebenzi yezoqoqosho ethi icuthe ifuthe kwindalo esingqongileyo kwaye ibuyisele oko sele kuhlaziswa.
Uphuhliso oluzinzileyo ngamanye amaxesha lulandela iinjongo ezingafumanekiyo kwabanye. Umzekelo, kwicandelo lezamandla, kuyinyani ukuba okona kusebenza kwamandla akho kunye namandla acocekileyo ngakumbi, amashishini amancinci aya konakalisa imeko-bume. Nangona kunjalo, ukuphuhlisa amashishini kunye neefektri ezifanelekileyo, kunyanzelekile uphuhliso lobuchwephesha olungabizi kakhulu, ke ayifumaneki kuwo onke amazwe ehlabathini.
Kumazwe anezimali ezimbalwa, isityalo esisebenza ngobume bendalo esingqongileyo esineendleko eziphezulu zokusebenza asizinzanga kunesityalo esiqhelekileyo, nokuba sisebenza kakuhle ngokwembono yendalo esingqongileyo. Ngesi sizathu, awona mazwe aphuhlileyo abaxhasi umbingelelo Oko kufuneka kunciphise ukukhula koqoqosho ngenxa yokuxhaphaza okusingqongileyo.
Ukuphelisa zonke ezi ngxaki zokulingana noqoqosho, indawo "Uphuhliso oluzinzileyo kwilizwe elahlukileyo" isebenza kwelicala ngokudibanisa amandla ezohlukeneyo kunye nokutolika iyantlukwano kwinkcubeko njengeyona nto iphambili yesicwangciso esitsha sophuhliso oluzinzileyo.
Ngolu lwazi uya kuba nakho ukwazi yonke into enxulumene nophuhliso oluzinzileyo ngalo lonke ixesha ulibona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Yendalo » Yonke into ofuna ukuyifumana malunga nophuhliso oluzinzileyo
Iintaka eziqhelekileyo ziya zisanda ngokwanda
Amandla ahlaziyiweyo eMzantsi Melika